Anya Anya | Ọkọwa Okwu Ahụike
Etu esi belata nku anya gị ma kwalitekwa ezigbo ọhụụ.
- Dr. Ben Kim na Nov 12, 2009
Isiokwu a depụtara usoro mmega anya dị mfe na isi ihe ị nwere ike iji belata nku anya ma kwado ọhụụ kachasị mma.
8 Ihe Nlebara Anya Puffy Anya Esi Ewepu Ha
Ma ị nwere oge n’abalị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ị nwere iko mmanya ole na ole n’abali tupu mgbe ahụ, anya nzuzu abaghị mma kachasị mma, ọ kachasị oge ọ na-anọọ ụbọchị dum n’echi ya.
10 Ngwọta Homelọ Na-ahụ Maka akpa Anya Na-arụ Ọrụ Dị Ka Amamịghe!
Chọrọ iwepụ ndị akpa anya na-achọ ngwa ngwa & na-adịgide adịgide na-enweghị mkpa maka ịwa ahụ ịchọ mma? Nke a bụ usoro ọgwụgwọ anụ ahụ 10 na ọgwụgwọ ụlọ maka okirikiri gbara ọchịchịrị & anya mmiri
Anya Anya gi
Ebenezer Yeboah Nwere ike 5, 2020
Egosiputara iji ihe ahia shopFreeMart oge nile na-akwado ahu ike. ShopFreeMart PureCopper, Vitalize, Siaga na Sugar-D nwere ike inye aka melite ahụike nke ọbara gị na obere arịa ọbara nke na-eburu oxygen na nri gị n’anya.
Imirikiti sayensị ọgwụ na ahụ ike, na-agọnahụ anụ ahụ, mgbe ị na - agọnarị - ma ọ bụ opekata mpe, ọ na - agbada na ndabere - isi mkpụrụ obi anyị.
Nlele a na - akachasị anya na ọgwụgwọ ọhụụ ebe a na-ahụ ụzọ anya dị ka usoro igwefoto dị ka ihe na-emeputa onyogho ma obu nke elebara anya. Zọ a jikọtara ọnụ na-eme ka mmadụ chee echiche dị mma. Ugogbe anya ugogbe juru ebe nile na omenala anyi, a na-ele ha anya dika ihe ndi mmadu na-acho. Ndị mmadụ jiri anya ha hụ ihe nke ọma na-aghọzi ụdị pụrụ iche.
Ọgwụ Ndị Na-ahụ Maka Mmiri Ahụike Na Ọgwụ
Ebenezer Yeboah Nwere ike 3, 2019
Ọrịa cataracts bụ ihe na - ebute isi nke ụwa, mana ndị mmadụ kpachapụrụ anya site na cataracts n'ihi na ha amaghị na enwere ike ịgwọ ya.